Midowga Africa oo boqolaal Malyuun oo Doolar ugu deeqaya dadka ku macaluulaya Geeska Africa. – Radio Daljir
Midowga Africa oo boqolaal Malyuun oo Doolar ugu deeqaya dadka ku macaluulaya Geeska Africa.
Agoosto 25, 2011 12:00 b 0
Adisababa, Aug, 25 – Ururka Midowga oo maanta shir uga furmay magaalada Addisbaba ee xarunta dalka Ethiopia ayaa ka arinsanaya sidii uu boqolaal malyuun oo dollar ugu yaboohilahaa abaaraha iyo macaluusha ku dhufatay dalalka Geeska Africa.
Shirka maanta furmay oo ah mid hal maalin soconaya ayaa ka tarjumidoona jawaabta ay dalalka African-ku ka bixinayaan abaaraha khatarta ku haya nolosha malaayiin qof oo ku nool Somalia, Ethioipia iyo Kenya.
Shirkaan ayaa lagu wadaa in uu soo jiito hogaamiyayaal dhawr ah oo African ah oo Magaalada Addisbaba ee xarunta ururka Midowga Africa u jooga shirka berito halkaasi ka furmaya ee isna looga arinsandoono mashaqada dalka Libya.
Dadka wax naqdiya ayaa sheegaya in ururuka midowga Africa uu ka gaabiyey wax ka qabashada dhibaatada bani?aadantinimo ee ka taagan geeska Africa halka ay wadamo kale oo deeq-bixiyaal ah oo aan African ahayn ay kaalin hormuud ah ka ciyaarayaan gargaarka dadka ay dhibaatadu kasoo gaadhay abaaraha iyo macaluusha ka jirta geeska Africa.
Ururka Midowga Africa ayaa horay balan ku qaaday in uu bixinayo $500,000 Million dollar ,laakiin xafiiska iskuxidhaka arimaha bani,aadanitinimada ee Qaramada Midoobey ee UN OCHA ayaa sheegaya in baahiyihu ay intaasi ka balaadhnayihiin.
Dad lagu qiyaasay 12.4 million qod oo ku nool geeska Africa ayaa waxaa soo foosaaray abaartii ugu xumayd mudo 60 sano .
Qunbulad gacmeed lagu tuuray xarunta idaacada Daljir ee Galkacyo.
Baahin: Arbaca, Aug 24, Weriye Axmed Jookar ~ Daljir ~ Bossaso. Maxkamada darajada 1-aad ee Garowe oo xukuntay madaxdii gobolka Sool ee Somaliland; M/weyne Faroole oo kala diray maamulkii gobolka Mudug, mid cusubna magacaabay; “Nadaafada, dhiraynta magaalada, iyo dhismaha wadooyinka ayaa noo qorshaysan” Duqa magaalada Bossaso.